Nhau - Inogona kuvezwa yeWPC kupendwa?
WPC decking iri ipfupi huni mapurasitiki uye anoumbwa nematanda, inowedzera uye inozivikanwa pasi rese. Kana isu tichitsanangura kuwanda kwekuumbiridza, isu tinogara tichiti WPC decking hapana pendi, hapana glue, yakaderera kugadzirisa.Ipapo pamwe mumwe munhu anozovhiringidza izvo zvinogona iyo WPC yekucheka mabhodhi kupendwa? , sei kupenda yekunze rinoumba WPC decking?
Ehezve isu tinogona kupenda iyo inoumbwa netiweki, inogona kunge yakafanana neyakaomarara huni.S Dzimwe nguva isu tinoda imwe imwe vara kana yako yemubatanidzwa decking iri kuratidza kumwe kupera, ipapo ingangove nguva yekutora zvinhu mumaoko ako iwe. Iwe unofanirwa kugadzirira bhurasho, imwe pendi uye zvimwe zvishandiso zvinodiwa.Ipapo tinogona kutanga kupenda yedu panze WPC decking.
Kutanga: Bvisa kana kufukidza zvirimwa.Kana iwe uine sango pane yako WPC yekucheka mabhodhi, iwe uchafanirwa kuvhara uye ese mashizha ane canvas kana epurasitiki donhwe machira kana kubvisa iwo kubva WPC uriri.
Chechipiri: Chenesa deck yako. Mamwe mabhodhi eWPC arikushandira wega, unogona kuchenesa zvirinani WPC yako paunenge uchigadzirira kupenda. Pamarara ekutanga uye kuchenesa tsvina, shandisa musanganiswa wemvura ine sipo uye yakaderera yekumanikidza simba washer kana bhurasho rakapfava. Nekubvisa chakuvhe uye chakuvhuvhu, iwe uchazoda kusanganisa muzvikamu zviviri vhiniga uye chikamu chimwe chemvura mubhaketi. Shenesa zvakajeka uye rega zviome.
Chechitatu: Sunga tafura yako yemubatanidzwa uye uiite yepakutanga.Kuti ushandise yakatsetseka pendi yependi inogoneka, unogona kuseta yako WPC huni decking ichienda munzira yezviyo kuti ubvise nekutsetsenura mapuranga ekushongedza. mutsvairo uye geza nemvura kamwechete Sarudza acrylic latex exterior primer uye udururire bhaketi mune yako roller tireyi.
Chechina: Penda yako panze WPC deckingKana iyo yekutanga iri 100% yakaoma, unogona kudira
yako yekunze yevharanda penda mune roller tireyi uye usvike kubasa.Zvezve, ita shuwa kuti rega yekutanga application iome zvakakwana usati wawedzera inogona kuita yechipiri jasi.Dry nguva dzakasiyana.so iwe unofanirwa kutarisa chigadzirwa chigadzirwa kune yakakurudzirwa nguva yekushandisa jasi.
Uye zvakare, ndeapi mavara iwe aunoda, iwe unongogadzirira iyo pendi kutanga.Tariro iwe unogona kuve nehunhu hwakawanda hupenyu nehunogadzirwa neWPC.
Post nguva: Jun-09-2021
huni mapurasitiki ematongerwo decking, WPC rinoumba decking, Kunze WPC decking, WPC decking uriri, WPC uriri, WPC yekunze decking,